क्रान्तिकारीका संयोजक विश्वकर्मालाई संलग्नता प्रमाणित गर्न खतिवडाको चुनौति | Hakahaki
क्रान्तिकारीका संयोजक विश्वकर्मालाई संलग्नता प्रमाणित गर्न खतिवडाको चुनौति
२८ भदौ, काठमाडौं । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का उपत्यका संयोजक लोकेश विश्वकर्मालाई नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने, कुरा लगाउने, गुटबन्दी गर्ने, नेतृत्वलाई समेत जुधाउने भन्दा बाँकी काम गर्न नजानेको भन्दै केदार खतिवडाले ठगी धन्दामा आफ्नो संलग्नता प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका छन् ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का उपत्यका संयोजक विश्वकर्माले नेकपा (माओवादी) र संगठनको साधारण सदस्य समेत नरहेका केदार खतिवडाले पार्टीको नाममा विभिन्न व्यवसायीसँग चन्दा उठाउँदै ठगी धन्दा गरेको स–प्रमाण रिर्पोट प्राप्त भएको भनी भदौ २६ गते विज्ञप्ति जारी गरेपछि उक्त विज्ञप्तिको खण्डन गर्दै केदार खतिवडाले विश्वकर्मालाई ठगी धन्दामा आफ्नो संलग्नता प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका हुन् ।
विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा केदार खतिवडा केही समय अघिसम्म पार्टी संगठनमा आवद्ध भए पनि आन्तरिक अनुशासन, विधि र पद्दति विपरीत गतिविधिमा सङ्लग्न रहेपछि २०७३ साउन २० गते साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरिएको उल्लेख छ । साथै, विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खतिवडालाई रुकुमका व्यवसायीसँग १ लाख रुपैयाँ चन्दा असुल गरेको आरोप लगाएका छन् ।
तर, केदार खतिवडाले ‘यी आरोपहरुप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै खण्डन गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकेश वि.क.को फेसबुक मार्फत् एउटा विज्ञप्तिमा २०७३ श्रावण २५ गते माओवादीको काठमाडौं जिल्लाको नगदी रसिद मार्फत रुकुमको व्यवसायी धनबहादुर के.सी.सँग रु. एक लाख खाएको भन्ने आरोप छ । जहाँसम्म चन्दा असुलेर खाएको भन्ने कुरामा म त्यो व्यक्तिलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ र म सँग उसको कुनै साइनो पनि छैन ।’
‘यो विषयले मलाई मर्माहत बनाएको छ । संगठन छोडेको ५ दिन पछि पार्टीको नगदी रसिद काटिएको सोही रसिदमा देखिएको छ, त्यही कुराले पुष्टि हुन्छ कि यो कर्तुत माओवादी खोल ओडेकाहरुले गरिखाने धन्दा हो’ खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संगठन गतिविधि छोडेपछि कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गरेको छैन । यदि कसैले भेटाएर प्रमाण पु-याएमा त्यसको सम्पूर्णरुपमा जिम्मेवारी लिई आवश्यक कारर्वाही भोग्न तयार छु ।’
केदार खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
हिजो २०७३।०५।२६ गते अनलाइनडबली र लोकेश वि.क.को फेसबुकमा आएको विज्ञप्तिप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै सत्य-तथ्य कुरा जनसमुदाय र शुभ-चिन्तकहरुमा प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।
मूलतः विज्ञप्तिमा ३ वटा विषयवस्तु उठान गरिएको छ ।
१) वैचारिक स्खलन र सांगठनिक रुपमा अराजक भई क्रान्तिबाट पलायन भएको ।
२) पार्टीमा आउने मानिसहरु अवसर लुट्न आएको ।
३) पार्टीको चिट्ठी र रसिद दुरुपयोग गरी चन्दा असुलेको ।
यी आरोपहरुप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । म इतिहासको यो मोडमा केही प्रश्नको जवाफ र केही मेरा मतहरु दर्ज गर्न चाहन्छु । हो, हामीहरुलाई विगत असोजमा भएको विद्यार्थी मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनले केही बुझाईहरुमा फरक प-यो । नेतृत्वको कार्यशैलीले हामी युवाहरुलाई तरंगित पनि पा-यो । हाम्रो तर्फबाट प्रमुख नेतृत्वलाई समस्याको जानकारी गराएका थियौँ र समाधान नभएपछि हामी सँग ३ वटा विकल्पहरु आए फेरि पुरानो सडेको संसदीय व्यवस्था मान्ने पार्टीमा फर्कने, रोजगारीका लागि पेशामा फर्कने वा अन्तिम विकल्प समाजवादी आन्दोलनमा आएका वैचारिक समस्यालाई समाधान गर्न अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने । मैले तेस्रो विकल्पको लागि पार्टीबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुँ ।
१) वैचारिक स्खलन र सांगठनिक रुपमा अराजक भई क्रान्तिबाट पलायन भएको :
यो उहाँको वास्तविक मुद्दा होइन । उहाँ खासमा विचार, संगठन के हो ? भन्ने बारे बेखवर हुनुहुन्छ । विचारहरु कसरी जन्मन्छन् र त्यो शक्तिमा कसरी व्यक्त हुन्छ ? के भयो भने पलायन हुन्छ ? के भयो भने अराजक हुन्छ ? उहाँ लाई प्रष्ट्याउन जरुरी छ । विषयको उठान गरेपछि पार लगाउनु जरुरी छ । इतिहासमा ‘को’ ठिक र ‘को’ बेठिक त्यो भोलिका दिनले समीक्षा गर्ने कुरा हो । आजको २१ औं शताब्दीको विज्ञान के हो र त्यसले मानव समुदायमा के प्रभावपारेको छ ? यो आजको मुख्य विषय हो । व्यापक छलफल गर्नु जरुरी छ । माक्र्सले भन्नुभएको छ ‘अज्ञानताले कसैलाई फाइदा गर्दैन’ तपाइको ज्ञान कहाँ हो प्रष्ट्याउनु होला ।
२) पार्टीमा आउने मानिसहरु अवसर लुट्न आएको :
यो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको रोग हो । पार्टीमा फरक मत आयो भने अवसरवादी, लुट्न आएको यावत कुरा भनिन्छ । विभिन्न लाल्छना लगाइन्छ । यो उहाँको पहुँच भन्दा बाहिरको विषय हो । उहाँलाई यी दुई विषय थाहा छैन । नेपालीमा एउटा उखान छ “नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ” मात्र उहाँले लेख्नको लागि लेखेको हो । जुन हावादारी कुरा हो ।
३) पार्टीको चिठठी र रसिद दुरुपयोग गरी चन्दा असुलेको :
हो, उहाँले यो विषयमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । यसको अलि विस्तृत घटना राख्न चाहन्छु । भाद्र २६ गते (हिजो) खबर डबली र लाेकेस वि.क.को फेसबुक मार्फत एउटा विज्ञप्तिमा २०७३ श्रावण २५ गते माओवादीको काठमाडौं जिल्लाको नगदी रसिद मार्फत रुकुमको व्यवसायी धनबहादुर के.सी.सँग रु एक लाख खाएको भन्ने आरोप छ । जहाँसम्म चन्दा असुलेर खाएको भन्ने कुरामा म त्यो व्यक्तिलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ र म सँग उसको कुनै साइनो पनि छैन । यो विषयले मलाई मर्माहत बनाएको छ । संगठन छोडेको ५ दिन पछि पार्टीको नगदी रसिद काटिएको सोही रसिदमा देखिएको छ त्यही कुराले पुष्टि हुन्छ कि यो कर्तुत माओवादी खोल ओडेकाहरुले गरिखाने धन्दा हो । संगठन गतिविधि छोडेपछि कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गरेको छैन । यदि कसैले भेटाएर प्रमाण पु-याएमा त्यसको सम्पूर्ण रुपमा जिम्मेबारी लिई आवश्यक कारर्वाही भोग्न तयार छु ।
म प्रष्ट पार्न चाहन्छु संगठनको गतिविधि प्रति बेरुचि भएपछि म पार्टीनै छाड्न तयार हुने मान्छेसँग त्यसको रसिद हुन्छ ? अलि न्यायपूर्ण विषयवस्तुको उठान गर्नु पर्दथ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन । किनभने, उहाँहरु चन्दा उठाएर खाने, जनयुद्धको धम्की लगाउने र परिवार चलाउने बाहेक खासमा अरु उहाँहरुको केहीं देखिदैन त्यही कुरा नै हुँदै आइरहेको पनि छ । यो विषयमा गम्भीर बन्न सो पार्टीका उच्च नेतृत्वहरुलाई बिनम्र अनुरोध गर्दछु । नेतृत्वको वरिपरि घुम्ने, कुरा लगाउने, गुटबन्दी गर्ने, नेतृत्वलाई समेत जुधाउने भन्दा बाँकी काम गर्न नजानेका क. लोकेश वि.क.लाई सो घटनामा मेरो संलग्नताको प्रमाणित गर्न चुनौति दिन चाहन्छु ।
सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियामार्फत व्यक्तिचरित्र हत्या गर्न उद्धत सबै व्यक्तिहरुलाई कारर्वाही गर्न र यथार्थ घटना प्रेषित गर्न अनुरोध गर्दछु । अन्यथा आम नागरिक न्यायको खोजीमा विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछ । – केदार खतिवडा
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)का उपत्यका संयोजक लोकेश वि.क.द्वारा जारी विज्ञप्ति: